COVID-19, mamely ireo vazimba teratany mpifindra monina ao Venezoelà ihany koa · Global Voices teny Malagasy
Ary vao mainka miharatsy ny raharaha rehefa nakatona ny sisintany
Voadika ny 17 Avrily 2020 14:52 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, Esperanto , Nederlands, русский, Español
Zazalahy iray sy ny fianakaviany ao anatin'ny iray amin'ireo tranolay telo fialofana vonjimaika nomen'ny UNICEF ao Rumichaca any Ekoatora, akaikin'ny sisintany iraisany amin'i Kôlômbia. Sary: Unicef Équateur/Flickr, nampiasàna ny lisansa CC.
Raha tsy misy fanamarihana manokana, mitondra mankany aminà pejy amin'ny fiteny Espaniôla ny rohy rehetra ato anaty lahatsoratra.
Im-betsaka efa noresahana ny olan'ireo venezoeliàna mpifindra monina, sy ny isa tsy mitsahatra mitombon'ireo Venezoeliàna “mpivenjivenjy”, fa kosa tsy dia misy zavatra fantatra firy ny momba ny toedraharaha iainan'ireo teratany mpifindramonina – ny ankamaroan'izy ireny dia ao anatin'ny foko Wayuu [fr], Warao [fr], Yukpa ary Pemón [fr].
Ilay antsoina hoe “Hamehana mananosarotra momba ny maha-olona” ao Venezoela, dia nihaza Venezoeliàna 4,7 tapitrisa handao ny firenen'izy ireo, nanomboka tamin'ny 2015. Io fifindramonina an-tery io dia heverin'ny Kaomisarià ambony ao amin'ny Firenena Mikambana ho toy ny fifindramonina henjana indrindra teo amin'ny tantara amin'izao fotoana izao ao amin'io faritra io [fr].
Ho fehin'ny rehetra, noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19, nakatona ireo sisintany iraisany amin'i Brezila sy Kôlômbia, nanomboka ny tapaky ny Martsa, vao mainka nanamafy ihany koa ny toedraharaha iainan'ireo teratany mpifindramonina. Satria tsy afaka intsony mandalo amin'ireo paositra eny amin'ny sisintany ry zareo — toy ilay ao Cúcuta any Kôlômbia — mba handeha hitady fanafody, sakafo sy vokatra hafa ilaina andavanandro, dia ireo lalankely na fiampitàna tsy ara-dalàna no ampiasainy mba hiampitàna ny sisintany, miaraka amin'izay loza rehetra mety ho aterak'izany.
Na dia kely monja aza ny isanjaton'ireo vehivavy teratany ao anatin'ireny mpifindramonina an-tapitrisa ireny, ny fikambanana iraisampirenena misahana ny fifindramonina (OIM) dia nampitandrina tamin'ny fanamarihana hoe tafiditra ao anatin'ny vondron'olona tena marefo ireny vehivavy ireny, fangaro mitambatra mahatonga izany ny sata maha-teratany, mpifindramonina ary vehivavy azy ireny.
Araka ny voalazan'ny minisitry ny fahasalamàna kôlômbiàna, vazimba teratany roa avy amin'ny foko Yukpa no voatsirika ho mitondra ny viriosy COVID-19 tao amin'ny sisintany iraisan'i Kôlômbia sy Venezoelà. Araka ny tatitry ny gazety iray ao an-toerana LaFm, notontosaina tany avaratr'i Santander, manakaiky ny 174 no isan'ireo mponina ao amin'ny faritra — tafiditra ao anatin'io ireo vehivavy teratany mitondra vohoka sy ny ankizy — nahiboka mba ho fisorohana.
Manamafy ireo manampahefana kôlômbiana fa mikaroka fatratra ireo marary ahitàna soritraretina mba hisorohana ny fihanaky ny aretina, ary ao an-tsaina hatrany ireo fahasarotana atrehana. Ary indrindra indrindra momba ny zavamisy mahakasika ireo yukpas, vahoaka azo ambara ho mpifindra toerana ihany, izay miaina fahantràna lalina saika any aminà tanàna kôlômbiàna miisa 15 eo ho eo, manasarotra ny fametrahana fihibohana mahomby.
Araka ny fanadihadiana iray nataon'ny HCR [fr] sy ny Fandaharanasa venezoeliàna ho an'ny fanabeazana-hetsika ho amin'ny zon'olombelona (Provea), ny hanoanana, ny aretina, ny herisetra ary ireo fandrahonana nifamatotra tamin'ny fitrandrahana ny toeram-ponenany sy ny hareny no nanery ireo teratany venezoeliàna mpifindramonina handao ny faritanin-dry zareo.
Ny lehiben'ny foko teratany Warao, Eligio Tejerina, mialokaloka any Boa Vista, Brezila amin'izao fotoana izao, no mitantara [fr] :
Noraisina ny fanapahankevitra hankaty Brezila satria noana ny zanakay. Mazàna no mitomany noho ny hanoanana izy ireo. Tsy nihinana afa-tsy iray lovia isanandro izy ireo, rehefa alina. Tena ampahany kely.
Araka ny voalazan'ny Kaomity mpiaro zon'olombelona ao Guajira, ny fifindramonina faobe nataon'ireo vahoaka teratany dia niteraka fisamantsamahan'ny fianakaviana sy ireo vondrom-piarahamonina, izay niteraka fahatsapàna fahabangàna sy fanirery saro-devonina, noho ny toetra maha-fikambanana mpandala ny iraisan'ny daholobe an'ireny fiarahamonina ireny.
Johanna Reina, mpiasan'ny HCR ao Kôlômbia, no milaza hoe [fr] :
Atrehan-dry zareo ny fahaverezan'ny maha-izy an-dry zareo, indrindra fa ny fiteny, ny fahasimbana tsy hita pesimpesenin'ny rafitry ny fiarahamoniny.
Araka ny HCR, ny sakana hafa tsy maintsy ihoarana dia ny sakan'ny fiteny — maro amin-dry zareo no tsy miteny ny fitenin'ilay firenena ka miankina amin'ireo zanatany mahay fiteny roa vao afaka mifandray — ary tsy manana taratasy famantarana azy, izay manakana azy ireo tsy hahazo fanohanana ara-politika avy amin'ny fanjakàna, izay tokony nisitrahan-dry zareo.
Ny hazofijalian'ireo vehivavy teratany
Araka ny lazain'ny Federasiôna iraisampirenena ho an'ny firahalahian'ny olombelona, tamin'izay rehetra nizoran-dry zareo, dia faneriterena maro no niaretan'ireo vehivavy mpifindramonina, halatra ary fanararaotana nataon'ireo manampahefana sy ireo vondrona mitam-piadiana. Tonga tamin-tahotra izy ireo, reraka, noana, ary mila tohana maika, indrindra fa tany amin'ireo tanàna an-tsisintany iraisan'i Kôlômbia sy Brezila. Tamin'ny fotoana nahatongavany, notantarain-dry zareo fa niaritra ry zareo tany Venezoelà, niatrika toedraharaha toy ny famoizan-janaka noho ny tsy fisian'ny fikarakaràna, sakafo ary fitaovana fototra ilaina ho an'ny fahadivoana, hoy ny tatitra iray avy amin'ny OIM.
Tonga ampolony ry zareo, narahan'ireo zanany sy ireo vehivavy nitondra vohoka, izay vao mainka nampiombo ny maha-marefo an-dry zareo. Manamafy ny Human Rights Watch [fr] fa nandritra ny fitetezana nataon-dry zareo, manao dia an-tongotra eo amin'ny ora 16 isanandro ireny vehivavy ireny, nandritra ny 13 andro raha kely indrindra.
Ny alina, mivory ao ambany tranolay iray vonjimaika natolotry ny UNICEF ao Rumichaca ireo ankizy sy ireo reny, any amin'ny lafy ekoatoriana amin'ny sisintany iraisany amin'i Kôlômbia. Sary: UNICEF Équateur/Flickr. Nampiasàna lisansa CC.
Na tonga tamin'izay naleha aza, tsy hoe afa-doza tanteraka akory. Manoloana ny fisian'ireo teratany venezoeliàna, nomarihan'ny OIM sy ny Provea ny ahiahy sy ny tsy fahazoana aina teny anivon'ireo manampahefana sasantsasany ary ny vahoaka nandray azy ireny, izay niteraka fitomboan'ny fankahalàna vahiny sy herisetra
Ampitandremin'ireo fikambanana roa ihany koa fa hoe iharan'ny fahantrana, ny fanararaotana amin'ny asa ary ny fandrahonana ho averina any amin'ny sisintany tsy misy fanajàna ny fenitra araka ny lalàna ireo vehivavy mpifindra monina. Ny sata maha-teny sy foko vitsy an'isa azy ireo dia mahatonga azy ireo ho mora lasibatr'ireo tambajotra mpanondrana olona, ny fivarotantena ary ny fanararaotana ireo tsy ampy taona nipetraka teny akaikin'ny toerana nialokalofan-dry zareo.
Manampy ireo rehetra ireo ny fahasahiranana anatiny tamin'ny olan'ny fifindramonina. Tamin'ny fotoana rehetra tany amin'ireo firenena mpandray, nananosarotra ny fifandraisana tamin'ireo vahoaka teratany tany amin-dry zareo., indrindra fa noho ireo hevidiso niraikitra, izay ireo politikan'ny fampanekena lembenana naverimberina no fototra nipoirany, hoy ny OIM.
Izany no antony nanafatrafaran'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana ho an'ny Zon'Olombelona an'ireo manampahefana mba hanasazy ny fankahalàna vahiny sy ny fanavakavahana atao an'ireo vehivavy mpifindra monina, ary hanome vahàna ny fomba fijery mitodika amin'ny fitoviana lentan'ny lahy sy vavy. Ny OIM kosa tetsy ankilany, nanosoka hevitra hampifanarahana ny fikarakarana atao an'ireo vehivavy teratany mpifindra monina amin'ny maha-foko vitsy an'isa azy ireo, na ara-piteny izany, na amin'ny maha-lahy na vavy.
Sitrahan'ireo vahoaka teratany ireo zo fototra, toy ny zo hiaina tsy misy fanavakavahana sy herisetra, ny zo hivezivezy malalaka ary ny hahazo fanohanana.
Sitrahan-dry zareo ihany koa ireo zo manokana mifamatotra amin'ny sata maha-teratany mizaka zom-pirenena roa azy ireo — venezoeliàana sy kôlômbiana, ohatra — toy ny zo hahazo fikarakarana mitovy fa tsy ny fampanekena lembenana, ary ny zo hanana tany sy fizakantena.
Na teo aza ireo fahasahiranana, tamin'ny 2018, nanamafy tamin'ny HCR ireo vehivavy mpifindra monina fa tsara kokoa ny fiainan-dry zareo ao Brezila sy Kôlômbia raha ampitahaina amin'ireo niaina tany Venezoelà, satria vitan'izy ireo ny nanana izay filàna fo, noho ny fifandrindràna nisy teo amin'ireo governemanta sy ireo fikambanana. Kanefa, ankehitriny, mihoatra ny 100 000 ireo fianakaviana teratany any Kôlômbia no tsy maintsy hiatrika loza maro hafa vaovao, miatrika ny valanaretina COVID-19.
Tsidiho ny fandrakofana manokana ataon'ny Global Voices momba ny : COVID-19 : fandrakofana manerana izao tontolo izao momba ilay valanaretina [fr].